ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှုကို သတင်းရယူခဲ့သည့် သတင်းစာဆရာ ဦးစံအောင် ကွယ်လွန် ~ RANGON NEWS DAILY
POWER MYANMAR Computer Training Centre (PMC)
ကွန်ပျူတာ အိမ်လိုက်သင်သည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် ကွန်ပျူတာ
ဘာသာရပ်များဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်လိုသူများအတွက် ကျွမ်း
ကျင်သောလုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာ/ဆရာမများ မှ အိမ်/
1. Basic Course (I-Office)
2. Internet & Email course (Level I,II)
3. DTP Course
4. Excel Advanced Course
5. Graphic Design Course
6. Multimedia Course
7. MYOB Level II,III (Computerized Accounting)
8. AutoCAD (2D/3D/Advanced)
(UK စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများအတွက် စီစဉ်ပေးသည်။ဘာသာရပ်တိုင်း
သူလိုလူ :'( :'( :'(
တိုင်းပြည်အတွက် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဒေသစွဲမထားပဲ အကောင်...
ရဲကားနှင့်​ အတိုင်​ပင်​ခံ ဝန်​ကြီးဌာနရုံးကား တိုက်...
ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှုကို သတင်းရယူခဲ့သည့် သတင်းစ...
Passport သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အသိပေးကြေ...
ဦးဝီရသူ တရားပွဲ ပုသိမ်တွင် ခွင့်မပြု
ကဗျာဆရာကြီး မောင်စိမ်းနီ ယမန်နေ့ ညပိုင်းက ကွယ်လွန်...
► 2014 (4365)
► 2013 (8138)
► February (877)
► 2012 (4618)
► November (777)
► October (760)
Android Application (318)
ANDROID PHONE ROOT (26)
Blogger နည်းပညာ (7)
Ebook ဘဏ်တိုက် (11)
International Sexy Model (1)
Mobile သတင်းရပ်ဝန်း (735)
Myanmar Sexy Model Girl (12)
ဂျာနယ် Download (3)
မိုးလေ၀သ သတင်း (259)
ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှုကို သတင်းရယူခဲ့သည့် သတင်းစာဆရာ ဦးစံအောင် ကွယ်လွန်
10:24 AM KhinMaung Latt No comments
RangonNewsDaily::Thursday. February 2. 2017
၁၉၄၇ ခုနစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ်ရေး ထိုးရာတွင် သတင်းသွားရောက် ရယူခဲ့သည့် ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာကြီး ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ပင်လုံ ဦးစံအောင် သည် ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက် ညပိုင်းက တောင်ကြီးမြို့နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့ည ၁၀ နာရီကျော်က ကွယ်လွန်တာပါ။ နေ့လယ် ၂ နာရီ ဒီကနေ့ သင်္ဂြိုဟ်မှာပါ” ဟု တောင်ကြီးမြို့ခံ ဦးတင်မောင်တိုးက The Ladies News သို့ ပြောသည်။
ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုစဉ်က မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာ သတင်းထောက်အဖြစ် သတင်းရယူခဲ့သည့် သက်ရှိ ပင်လုံဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်း ခံရသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဦးစံအောင်အား ၁၉၂၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် တောင်ကြီးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဦးစံအောင် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်က American Baptist Missionary School တွင် အထက်တန်းပညာ သင်ကြားနေချိန်က မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာသို့ သတင်းများ ရေးသားပေးပို့ရင်း အကျိုးတော်ဆောင် သတင်းထောက်အဖြစ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပသည့် ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပအိုဝ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၃ မှနေ၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရ၍ ၁၉၅၂ မှ ၁၉၅၆ ခုနှစ်အထိ ပါလီမန်တွင်
ဥပဒေပြုအမတ် တာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။
တရုတ်ဖြူ ကျူးကျော်မှုကို ကုလသမဂ္ဂတွင် မြန်မာအစိုးရက သက်သေပြရန် ၁၉၅၃ ခုနှစ်အတွင်း ပြင်ဆင်ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂကို တင်ပြဖို့ အထောက်အထားရဖို့
ဓာတ်ပုံအပြင် အခြားသက်သေများ ပြသနိုင်ရန် လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆရာကြီးသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ မွတ်ဆလင် သုသ၁န်၌ နေ့လယ်ပိုင်း တွင် မြေမြှပ်သင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by : ကိုလတ် Cool Download Rox | Admin at 10:24 AM
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဒေ၀ါလီနေ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကျင်းပ
ရန်ကုန်- ဘားအံ ပွင့်သစ်စရတနာ မှန်လုံယာဉ်နှင့် ၁၈ ဘီး ဘိလပ်မြေ တင် ယာဉ်နှစ်စီး တိမ်းရှောင်ရာမှ ရိုက်နှက် မှုဖြစ်
လေဖြတ်နေတဲ့ မိခင်ကို သားဖြစ်သူက အရက်ဖိုးတောင်းမရလို့ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ရာက သေဆုံး
မုံရွာ-မန္တလေးကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဘုရားဖူးယာဉ်နှင့် ကုန်တင်ယာဉ် ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက် တစ်ဦးသေ၊ ၂၁ ဦးဒဏ်ရာရ
ရေအောက်ရှိ နဂါးများကိစ္စ ခေတ်လူငယ်များအကြား ရယ်စရာဖြစ်နေ
၂၈ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ မြန်မာက ရွှေတံဆိပ်ဆုနှင့်အခြားဆုများရရှိ
အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်လာသည့် ကျောင်းသားသပိတ် ၀န်းရံ ပြည်သူ ၁၁ ဦး ပုဒ်မ သုံးခုဖြင့် ဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်ရမည်
7 July အထိမ်းအမှတ် သမဂ္ဂမြက်ခင်းပြင်ရှေ့တွင်ပြုလုပ်
အောင်ဇေယျတံတား အတက်တွင် ယာဉ် (၂)စီး မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်မိသဖြင့် (၃)ဦးသေဆုံး
Hajj ဘုရားဖူးအချင်းချင်း နင်းမိ၍ သေဆုံးသူ ၇၀၀ ကျော်မြင့်တက်
သတင်းစာ နှင့် ဂျာနယ်
Powered by kolatt (Pabedan)
Copyright © 2011 RANGON NEWS DAILY Design by www.hostreviewgeeks.com Sponsored By iOS6Jailbreak, iPhone 4s iOS6Jailbreak and Blogger Template